अनन्त : पारित् भयो ! ब ला त्का रीको लि ङ्ग का टेर न’पुँसक ब’नाउने का’नून” – AB Sansar
September 22, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on अनन्त : पारित् भयो ! ब ला त्का रीको लि ङ्ग का टेर न’पुँसक ब’नाउने का’नून”
(एजेन्सी) महिला तथा बा लिका माथि ब ला त्का रको ब ढ्दो घ ट नाका का रण आक्रान्त नाइजेरियामा क दुना प्रान्तको सरकारले बला त्का रीलाई श ल्यक्रि या द्वा रा नपुंसक बनाउने फैसला गरेको छ। कुनै अपराधीले १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बा लिकामा थि उ क्त कु कृत्य गरेको ठ हरिएमा उसलाई फाँ सी दि इने भ एको छ। सर कारले यस स म्बन्धमा ल्या इएको का नुनमा ह स्ताक्षर गरेको छ।
कोरोना भा’इरस प्रति’बन्धका का’रण देशमा ब’ला’त्कारको घ’टनामा अ’त्यधिक वृद्धि भएको छ। यसले ना’गरिकमा व्या’पक आ’क्रोश बढाएको छ। जनताको आ’क्रोश लाई ध्या’नमा राख्दै राज्यका गभर्नरले आप त्कालीन स्थि तिको घो षणा गरेका छन्। यस ग म्भीर अपरा धबाट ब च्चालाई जो गाउन अत्य न्त क डा क दम उ ठाउन आ वश्यक भएको गभर्नर न सिर अहमद इल रुफइले ब ताएका छन्।
दे शमा वृद्धि भइ रहेको ब ला त्का रको घ टनाका का रण म हिला अधिकार कर्मीले बला त्का रीमाथि क ठोर का रबा ही गर्न मा ग ग रेका छन्। उनी हरूले अ फ्रिका महा द्वीपमा स बैभन्दा धेरै आ’वादी भ’एको देशमा ब’ला’त्का’रीलाई मृ’त्युद’ण्ड दि’नुपर्ने माग राखेका थिए। राज्यको नयाँ कानुनमा १४ वर्षभन्दा ब;ढी उमेर;का महि;लामाथि ब;ला;त्का;र गर्ने ब;ला;त्का;री;लाई; आज;न्म; कै;द;को;; सजाय दिने व्यव;स्था गरिए;को छ।
यति मा;त्र हो;इन ब;लात्का;रीलाई श;ल्यक्रि;या गरी नपुं;सक पनि ब;नाइने छ। यदि, कुनै पुरु;षले १४ वर्ष;भन्दा क;म उमेरका ब;च्चालाई ब;ला;त्का;र ग;रेमा उनीह;रूको ;गर्भा;श;य नि;का;लिनेछ। के;ही दिनअ;घि पाकि;स्तानका प्र;धानमन्त्री इम;रान खा;नले पनि ब;ला;त्का;रीलाई फाँ;सी दिन सु;झाव दि;एका थिए। इम;रानले ब;ला;त्का;रीलाई रासा;यनिक ब;न्ध्या;करण गर्न पनि सु;झाव दिएका थि;ए। इम;रान खा;नले यौ;न दु;व्र्य;व;हार ग;र्नेको ए;क रा;ष्ट्रिय पञ्जी;क;रण बना;उन पनि आ;ह्वान गरेका छन्।
पाकिस्तानी प्रधानम;न्त्रीले एक टे;लिभिजन च्या;नलसँगको वा;र्तामा ब;लात्का;रीलाई त;त्काल रासा;यनिक ब;न्ध्याक;रण गर्न आव;श्यक भ;एको बता;एका थिए। यदि, त्य;स्तो हुन नस;केमा क;म्तीमा ब;लात्का;रीलाई भ;विष्यमा पुनः त्य;स्ता यौ;न अपराध गर्न नस;किने गरी ज;बरज;स्ती श;ल्यक्रि;या गर्नुपर्ने सु;झाव दि;एका थिए।
एकैदिन १७ सय रूपैयाँले घ’ट्यो सुनको मू’ल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार?